ပထမဆုံးစတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ချိန်နှင့် ယခုလက်ရှိ၏ ပြောင်းလဲသွားသည်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားသည့် သရုပ်ဆောင် ၁၈ ဦး - ONE DAILY MEDIA
သင့်ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ အချိန်ကို ပြန်ပြောင်းဖို့ တွေးဖူးလား။ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ အတွက် အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်တွေကို ပြန်ရှာကြည့်ပါက သူတို့အသက် 23 နှစ်လောက်ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် 16 နှစ်တွေတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် 5နှစ်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကနေ အခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ပုံစံနဲ့ အရမ်းကွာခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင် 18 ယောက်ကို စုစည်းထားပါတယ် ။ သူ့တို့ရဲ့ “ယခု” ဓာတ်ပုံကို မတင်ရင် နောက်ဆုံးမင်းသားကို မင်းမှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အာမခံပါတယ်။
18. Tilda Swinton, 1986 နှင့် ယခု
သူမ၏ ပထမဆုံးဇာတ်‌ ကောင် တစ်ခုမှာ ဂျာမန်ဒရာမာ Egomania – Island Without Hope (Egomania – Insel ohne Hoffnung) တွင် ဆယ်လီအမည်ရှိ မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။
17. Matthew McConaughey, 1993 နှင့် ယခု
သူ၏ ပထမဆုံးဇာတ်ကားမှာ Dazed and Confused မှ Wooderson ဖြစ်ပါတယ်။
16. Joseph Gordon-Levitt, 1987 နှင့် ယခု
အသက်7နှစ်တွင် Family Ties ၏ အပိုင်းအချို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး သူ့ဇာတ်ကောင် ကတော့ Dougie ပါ။
15. Dakota Fanning၊ 2004 နှင့် ယခု
ငယ်ရွယ်သေးသော်လည်း (ဒါကိုတာ အသက် 24 နှစ်သာရှိသေးသည်)၊ သူမသည် အသက်6နှစ်ကတည်းကပင် အနုပညာအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ 2004 ခုနှစ်တွင် နာမည်ကျော် Friends TV ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူမ၏ဇာတ်ရုပ်မှာ Mackenzie ဖြစ်ပါတယ်။
14. Jennifer Connelly, 1983 နှင့် ယခု
Once UponaTime in America သည် သူမ၏ ပထမဆုံးသော ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယိ။ သူမသည် Young Deborah အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
13. Emilia Clarke၊ 2010 နှင့် ယခု
Games of Thrones တွင် Daenerys ဇာတ်ရုပ်ဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့သော်လည်း Emilia ၏ ပထမဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ Triassic Attack ဖြစ်ပြီး သူမ၏ ဇာတ်ရုပ်မှာ Savannah ဖြစ်ပါတယ်။
12. James McAvoy, 1995 နှင့် ယခု
James သည် ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အသက် 16 နှစ်အရွယ်တွင် သရုပ်ဆောင်လောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ပထမဆုံးဇာတ်ကားမှာ The Near Room ဖြစ်ပြီး သူ၏ကာကိုက်တာမှာ Kevin ဖြစ်ပါတယ်။
11. Reese Witherspoon၊ 1991 နှင့် ယခု
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် အော်စကာဆုရှင် Reese သည် 1991 ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်များတွင် စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အသက် 15 နှစ်မှာ The Man in the Moon တွင် Dani Trant အဖြစ် ပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
10. Christina Ricci, 1990 နှင့် ယခု
သူမသည် အသက် 10 နှစ် 1990 ခုနှစ်တွင် ပွဲဦးထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် Cher (Mrs. Flax) နှင့် Cher ၏သမီးငယ် Kate Flax ကို ပုံဖော်ထားသည့် နာမည်ကျော် Mermaids ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
9. Michael Fassbender, 2001 နှင့် ယခု
မိုက်ကယ်သည် အော်စကာဆု ၂ ကြိမ် ဆန်ခါတင်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူသည် 2001 ခုနှစ်တွင် Band of Brothers TV miniseries တွင် Burton P. Christenson အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
8. Kirsten Dunst၊ 1990 နှင့် ယခု
သူမသည် Vampire: The Vampire Chronicles နှင့် Interview တွင် Brad Pitt နှင့် Tom Cruise တို့နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 1994 ခုနှစ်တွင် နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ The Bonfire of the Vanities ဖြစ်ပြီး အသက် 8 နှစ်မှာ Campbell McCoy အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
7. Norman Reedus၊ 1998 နဲ့ အခု
The Walking Dead ၏ကြယ်ပွင့်၊ Norman သည် 1997 ခုနှစ်တွင်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ 1998 ခုနှစ်တွင် Dark Harbor တွင်လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
6. Keira Knightley, 1995 နှင့် ယခု
Star Wars ဟာ သူမ၏ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်မဟုတ်ပေ။ 1995 ခုနှစ်က Keira ဟာ အသက် 10 နှစ်တွင် Innocent Lies တွင် Young Celia အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
5. Hugh Jackman၊ 1995 နှင့် ယခု၊
Hugh သည် ဩစတေးလျသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ယင်းနေရာတွင် စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Correlli တီဗီစီးရီးတွင် Kevin Jones အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
4. Chuck Norris, 1972 နှင့် ယခု
Chuck ငယ်ငယ်က Bruce Lee နှင့် ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသောကြောင့် ၎င်းသည် အကြီးကျယ်ဆုံး ပွဲဦးထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 1972 ခုနှစ်တွင် The Way of the Dragon တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Norris သည် အဓိကဗီလိန် Colt အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
3. Jodie Foster, 1972 နှင့် ယခု
သူမ၏ ပထမဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ Napoleon and Samantha ဖြစ်ပြီး သူမသည် အသက် 10 နှစ်တွင် Samantha အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ
2. Michael Caine၊ 1964 နှင့် ယခု
Sir Michael Caine သည် 1956 ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်များတွင် စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Zulu သည် Lt. Gonville Bromhead အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ၎င်း၏ အစောပိုင်းရုပ်ရှင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
1. Anthony Hopkins၊ 1968 နှင့် ယခု
Anthony Hopkins သည် ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အော်စကာဆုရှင် ဒေါက်တာ Hannibal Lecter ဖြစ်ပါတယ်။ 1960 တွင် သူ၏ သရုပ်ဆောင်လောကကို စတင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ပထမဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းများထဲမှ ဇာတ်ကားများမှာ The Lion in Winter ဖြစ်ပြီး Richard အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အမြင်အရရော ဘယ်သရုပ်ဆောင်တွေက အပြောင်းလဲဆုံးလဲ။ သင့်အတွေးအမြင်များကို အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင် မျှဝေခဲ့နိုင်ပါတယ်။